I-9 Best Face Razor Yabesifazane 2021 yohlelo lokusebenza lwe-Smooth Makeup - Ubuhle
I-Face Face Razors Yabesifazane, ye-Peach Fuzz ne-Beyond
Ngokuzithoba kwemikhiqizo / uClara Hendler
Noma ngabe ufuna ukusula i-peach fuzz, yenza kahle i-browser yakho phakathi kwama-aphoyintimenti, noma ngisho khipha amangqamuzana esikhumba afile , i-razor yobuso engcono kakhulu yabesifazane izoba ngumngane wakho omkhulu. Njenganoma yiluphi olunye uhlobo lokususwa kwezinwele, okwenzayo ngezinwele ebusweni bakho kungukukhetha kwakho (nebhizinisi lakho). Kepha uma ufuna ukuyisusa, kunezinketho eziningi kunanini ngaphambili uma kukhulunywa ngokuthi ukwenze kanjani. Ngenkathi i-waxing ne-tweezing mihle, ngaphandle kokusebenziseka kalula, ukushefa kunenzuzo eyengeziwe: Kusebenza ngendlela efanayo nokwelashwa okwenziwe nge-dermaplaning ongakuthola esalon. Ukususa i-peach fuzz kungakha iseyile ebushelelezi yokwenza izimonyo, futhi insingo izokhipha ngobumnene ungqimba oluphezulu lwesikhumba sakho ukuze lubukeke lukhulu futhi lukhazimule. Siqoqe izinsingo ezingcono kakhulu zobuso zabesifazane kuzo zonke izindawo zamanani, sisuka ku- $ 5 razor yesandla kuya ku- $ 200 kits okunethezeka. Skrolela kuzinketho zawo wonke umuntu.
Ngokuzithoba komkhiqizo 1/9
Ugesi Ohamba Phambili: Awunasici Ngokuqeda Isisusa Sezinwele Esibukeka Ngamehlo Esibuhlungu
Lokhu akuyona insingo empeleni, kepha isebenza ngokufanayo. Lesi shaver sikagesi sisebenzisa ikhanda elizungezayo ukuze sibhebhethekise ngokushesha nangaphandle kobuhlungu noma yiziphi izinwele ezingafuneki. Vele uyigijime ebusweni bakho ngokunyakaza okuyindilinga, bese usethelwe. Imnene ngokwanele ukusebenzisa nsuku zonke futhi isebenza ngebhethri, futhi iza nokukhanya okwakhelwe ngaphakathi ukuze ungakhohlwa noma yiziphi zalezo zinwele okunzima ukuziphuthelwa.
$ 20 Okungenaphutha Ngokuqeda Ukuthinta Thenga Manje
Ngokuzithoba komkhiqizo 2/9
Isabelomali Esihamba Phambili: I-Tinkle Eyebrow Razor
Lezi zinsingo ezingekho-frills zithandwa ngamakhulu wababuyekezi. Zibukhali ngokwanele ukubamba izinwele ngaphandle kokukhuhla noma ukusika, kulula ukuzulazula esikhunjeni, futhi ezingabizi kakhulu ongazisebenzisa izikhathi ezimbalwa, bese uphonsa. Zingasetshenziselwa amashiya, udebe olungaphezulu, noma ebusweni bonke ukukhishwa okulula.
$ 4.50 I-Amazon Thenga Manje
Ngokuzithoba komkhiqizo 3/9
Ukulahlwa Okuhamba phambili: I-Schick Silk Touch-Up Razor Facial
Lezi zinsingo zokuthinta zinesibambo eside nenkaba eyodwa, ngakho-ke kulula ukuzilawula futhi zithambile kakhulu esikhunjeni sakho. I-blade eqondile isebenza kahle kwi-peach fuzz naku-brows, noma njengethuluzi le-allover dermaplaning. Uthola izinsingo ezintathu nekhava eyodwa yokunemba nje yokuphequlula ngaphansi kwe- $ 5, esingayibheka njenge-bang yangempela ngembabala yakho.
$ 5 Fancy Thenga Manje
Ngokuzithoba komkhiqizo 4/9
Okuhle Okuhlehle Kakhulu: Isitolo Esidayisa Izinto Ezakhiwe Ngezinto Esibuyiselwayo Esitholwa Ngama-Crème
Uma ufuna inketho ehlala isikhathi eside enhle kakhulu ekuhambeni, i-blade ehoxiswayo kuzoba ukubheja kwakho okuhle kakhulu. Ababuyekezi bahlambalaza ngokuthi ama-blade abukhali futhi ahlala isikhathi eside kangakanani ngentengo, futhi ubathande ukuhlanza yonke into kusuka ku-browser kuya kumugqa we-bikini. Izibambo ezinombala kamaskandi ziyibhonasi eyengeziwe.
$ 7 Isitolo seCreme Thenga Manje
Ngokuzithoba komkhiqizo 5/9
Okuhle kakhulu kumashiya: UJoey Healy Ukuzilungisa iDermablade Trio
Lezi zinsingo ezenziwe yinkosi ye-brow uJoey Healy zinhle ekuhlanzeni i-browser phakathi kwama-aphoyintimenti, kepha izibambo zawo eziqinile, zensimbi engagqwali nazo zilungele ukusetshenziswa ebusweni bakho bonke. Ziyakwazi ukuhlehliswa futhi zilungele ukuhamba, futhi i-blade ngayinye ingasetshenziswa kuze kube kahlanu ngaphandle kokudamba,
$ 18 UJoey Healy Thenga Manje
Ngokuzithoba komkhiqizo 6/9
Okuphinda kugcwaliseke kabusha: I-Sephora Collection Facial Razor
Uma ufuna ukuchitha imali ethe xaxa ku-razor evuselelekayo ngaphandle kokungena endaweni ye-splurge, i-Sephora Collection's iyindlela enhle. Isibambo sensimbi sibushelelezi futhi siqinile, ngokubamba okukhethekile ukuze kubanjwe kalula. Iza necala lokugcina lepulasitiki elilukhuni namakhasi amathathu angeziwe, ngakho-ke yize ingaphezulu kancane ngaphambili, yakhelwe ukuhlala isikhathi eside.
izinwele ezinsundu ezikhanyayo ezinobukhulu
$ 16 ISephora Thenga Manje
Ngokuzithoba komkhiqizo 7/9
Okuhle Kakhulu Kulawulo: Ama-Tweezerman Prep and Plane Razors
Isibambo esifushane sizokusiza ukuthola insingo ngqo lapho uyifuna khona, futhi umbala oshisayo obomvana ubamnandi kakhulu futhi uheha iso. Amacembe wensimbi angenasici kulula ukuwahlanza futhi amnene kakhulu, futhi angasetshenziswa kuze kube kane nge-razor ngayinye. Ababuyekezi babathanda ngokukhethekile ngokwenza i-dermaplaning ngoba ama-blade anomusa ngokwengeziwe.
$ 10 Tweezerman Thenga Manje
Ngokuzithoba komkhiqizo 8/9
Okuhle kakhulu kwe-Dermaplaning: Ithuluzi le-StackedSkincare Dermaplaning
Lenzelwe ikakhulukazi i-dermaplaning, leli thuluzi lisusa ngobumnene i-peach fuzz namaseli esikhumba afile ukuveza isikhumba esibushelelezi, esikhanyayo futhi sikhanyise izindawo ezimnyama ngokuhamba kwesikhathi. Amacembe angabuyiselwa emuva ayinsimbi engagqwali yokuhlinzeka yemiphumela ye-pro-grade ekhaya, futhi isibambo se-aluminium siyasimama, asilula, futhi sihlala isikhathi eside. Futhi kuyintandokazi yederm nobuso.
$ 75 I-StackedSkincare Thenga Manje
Okunethezeka Okuhamba Phambili: Idivayisi Yokukhipha Ukwehliswa Kwe-Dermaflash Luxe Anti-Aging Dermaplaning Exfoliation
Le yiCadillac ngempela yokususa izinwele ebusweni. Iqhathaniswa nokwelashwa kochwepheshe futhi ethandwayo ngabadwebi be-celeb makeup, i-blade blade ngobumnene kepha ikhipha ngokweqile futhi isuse izinwele zebala elikhazimulayo ngokushesha futhi ngokuhamba kwesikhathi. Ikhithi iza neshaja, ama-blade amane afakwa esikhundleni, kanye ne-serum yangaphambi nangemva kokwelapha.
$ 199 ISephora Thenga Manje
abesifazane bafake imikhono emide enemikhono emide
ama-cornrows ngaphambili kwamagoda angashadile ngemuva
uthatha isikhathi esingakanani imijovo yezindebe ukwelashwa
ngingazithathela kuphi izinkophe zami